Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း- အဆင့်ဆင့် | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Eder Ferreno | 10/01/2022 16:00 | Microsoft Word ကို, ရုံးအလိုအလျောက်
Microsoft Word သည် သန်းနှင့်ချီသောလူများနေ့စဥ်အသုံးပြုနေသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။အလုပ်အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ စာသင်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်၊ Microsoft ၏ စာရွက်စာတမ်းတည်းဖြတ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးချယ်စရာများစွာကိုပေးသည့် အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူတော်တော်များများမသိတဲ့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုပြီး အစီအစဉ်ဆွဲဖို့တောင် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ထို့ကြောင့်၊ Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်နည်းကို သင့်အား ပြသထားသည်။
ဤနည်းဖြင့် ဤပရိုဂရမ်က ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးသော ရွေးချယ်စရာများနှင့် ဤအစီအစဥ်ကို ဖန်တီးနိုင်သည့်နည်းလမ်းကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၊ ၎င်းသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် ရည်ရွယ်ထားသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် တူညီသောရလဒ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ သိချင်လျှင် Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နည်း၊ ဒါက ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတာကို မင်းကိုပြမယ်။
floor plan ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရန် လိုအပ်ပြီး ၎င်းအတွက် ဤအထူးပြုပရိုဂရမ်များထဲမှ တစ်ခုကို အသုံးမပြုလိုသူများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေမျိုးတွင် သင်သည် Word ကို ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရန် ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ် သင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်စွာ ဖြည့်ဆည်းပေးသည့် ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ၎င်းသည် ထိုအချိန်တွင် သင်လိုအပ်သောအရာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး အရေးကြီးသည့်အရာလည်းဖြစ်သည်။
လုပ်ဆောင်ရမည့် အဆင့်များကို ညွှန်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ 2D အစီအစဉ်နှင့် 3D မော်ဒယ်ကို လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒါကြောင့် Word မှာ အစီအစဉ်တစ်ခု ဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။ သင့်တွင် ဤလုပ်ဆောင်ချက်အမျိုးအစားအတွက် ပါ၀င်သော အထူးပရိုဂရမ်များမရှိလျှင် သို့မဟုတ် သုံးနိုင်လျှင် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
1 Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
1.1 လေယာဉ်ကို စာရွက်စာတမ်းတွင် ထည့်ပါ။
2 3D မော်ဒယ်လ်
Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နည်း
Microsoft Word သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပုံများ သို့မဟုတ် ပုံများဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ပေးပါသည်။. အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကြမ်းခင်းအစီအစဥ်တစ်ခုပြုလုပ်လိုပါက၊ ဤပရိုဂရမ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်သော ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ Shapes လုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတွင် စတုဂံများ၊ စက်ဝိုင်းများနှင့် အခြားပုံသဏ္ဍာန်များစွာကို ရေးဆွဲနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေနေသည့် 3D သို့မဟုတ် 2D အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိနိုင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား အင်တာနက်ပေါ်တွင် တွေ့ရှိရသည့် ပုံဥပမာများ သို့မဟုတ် ပုံများကို ထည့်သွင်းနိုင်စေမည့် Online Images လုပ်ဆောင်ချက်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဤရွေးချယ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အနည်းငယ်ပို၍ လက်တွေ့ကျပြီး ပိုမိုကျွမ်းကျင်သောရလဒ်ကို ပေးပါလိမ့်မည်။
လေယာဉ်ကို စာရွက်စာတမ်းတွင် ထည့်ပါ။
ဤကိစ္စတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် Forms ရွေးချယ်မှုကို အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်။Word document တစ်ခုတွင် ဤလေယာဉ်ကို အစမှဆွဲထုတ်ရန် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင်ကိုယ်တိုင်လိုက်နာရမည့် အဆင့်များကို သင်မြင်နိုင်စေရန်။ ဤနည်းလမ်းကို ကျွန်ုပ်တို့ လောင်းမည်ဆိုပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာမှာ အိမ်ခြံမြေဧရိယာကို ကန့်သတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စာရွက်စာတမ်းတွင် မေးခွန်းထုတ်ထားသော လေယာဉ်ဒီဇိုင်းတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် အခြေခံအုတ်မြစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် အဆင့်များစွာကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်-
ထိုလေယာဉ်ကို သင်ဖန်တီးလိုသည့် စာရွက်စာတမ်းကို Word တွင်ဖွင့်ပါ။
အစီအစဉ်ကို ထည့်သွင်းလိုသည့် စာရွက်စာတမ်းတွင် သင့်ကိုယ်သင် နေရာချထားပါ။
စခရင်၏ထိပ်ရှိ ကိရိယာဘားရှိ Insert menu သို့သွားပါ။
Shapes ကို ရွေးပါ။
Rectangle option ကိုနှိပ်ပါ။
မောက်စ်ကို အသုံးပြု၍ စာရွက်စာတမ်းရှိ ထောင့်မှန်စတုဂံ၏ လိုချင်သောအရွယ်အစားကို ဖန်တီးရန် ကာဆာကို ရွှေ့ပါ။
Fill shape option ကိုသွားပါ။
ဤကိစ္စတွင်၊ No ဖြည့်စွက်ရွေးချယ်မှုကိုရွေးချယ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဤပုံ၏ contour ၏အရောင်ကို ပြောင်းလဲလိုပါက "Shape contour" ကိုနှိပ်ပြီး ထို contour အတွက် လိုချင်သောအရောင်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
Script option ကို ရွေးပါ။
ဤပထမအဆင့်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤလေယာဉ်၏အခြေခံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သော ထောင့်မှန်စတုဂံကို ဖန်တီးထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် အစီအစဥ်တွင် ကိုယ်စားပြုမည့် အိမ် သို့မဟုတ် နေရာကို ကိုယ်စားပြုမည့် ပုံဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် ဤကောက်ကြောင်းကို ရရှိပြီးသည်နှင့် မေးခွန်းထုတ်စရာ အိမ်ခန်းအတွင်းပိုင်းကို ဖန်တီးရန် အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤအစီအစဥ်ပြီးစီးစေရန် အခန်းများကို ညွှန်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအရာသည် အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သော်လည်း အလွန်အမင်း ဒုက္ခမပေးဘဲ လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့မှာ အဲဒီလေယာဉ်ရှိပြီးသားမို့ Word မှာ လေယာဉ်လုပ်နည်းရဲ့ ဒုတိယအဆင့်၊ အခန်းများကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။. ဤကိစ္စရပ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော ထောင့်မှန်စတုဂံရှိ Microsoft ဆော့ဖ်ဝဲလ်တွင် ဤစာရွက်စာတမ်းတွင် သင့်အိမ်၏ကန့်သတ်ချက်များကို ရေးဆွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ယခုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာရမည့်အဆင့်များမှာ-
Word တွင် သင်ဖန်တီးထားသော ထောင့်မှန်စတုဂံတွင် သင့်ကိုယ်သင် ကြည့်ပါ။
ကိရိယာဘားရှိ စခရင်၏ထိပ်ရှိ Insert option ကိုနှိပ်ပါ။
Shapes ရွေးချယ်မှုကို ရွေးပါ။
ထောင့်မှန်စတုဂံအသစ်တစ်ခုကို ရွေးပြီး သင်ဖန်တီးထားသည့် စတုဂံအတွင်းတွင် ဤပုံကိုဆွဲပါ၊ သင်အသုံးပြုလိုသည့်အရွယ်အစားကို မှတ်သားထားပါ။
ထို့နောက် Word တွင်ရနိုင်သော အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက်ပေတံကို အသုံးပြု၍ အတိုင်းအတာများကို သတ်မှတ်ရပါမည်။
အိမ်၏ စင်္ကြံနှင့် အခြားနေရာများကို ဆွဲပါ။ ဤအတွက် Line option ကိုသွားပါ။
အဲဒီလိုင်းကို ချလိုက်ပါ။ ၎င်းတို့၏အရွယ်အစားကို သင့်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သည်၊ ထို့အပြင် Alt option သည် သင့်အား ဤကိစ္စတွင် ပိုမိုတိကျမှုရှိစေရန် ခွင့်ပြုပေးပါသည်။
ဤစာကြောင်းများဆွဲပြီးသောအခါ Ctrl ကိုဖိထားပြီး ပုံသဏ္ဍာန်အားလုံးကို ရွေးပါ။ ပြီးရင် mouse ကို right click နှိပ်ပါ။
Group option ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဤရွေးချယ်မှုသည် တစ်ခုတည်းသော ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် စာရွက်စာတမ်းတွင် သင်နှစ်သက်သလို ရွှေ့နိုင်သည်။
တံခါး သို့မဟုတ် ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဆွဲလိုပါက၊ Flowchart အုပ်စုမှ Delay ပုံသဏ္ဍာန်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။
ဤအဆင့်များဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်အတွင်း၌ ကန့်သတ်ချက်များကို ဖန်တီးထားပါသည်။အဲဒီအိမ်မှာ ရှိတဲ့ အခန်းတိုင်းရဲ့ အရွယ်အစားကို ပြပေးတဲ့အတွက် ဒီအစီအစဥ်က ပြီးသွားပါပြီ။ ၎င်းသည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အစီအစဥ်တစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း အနည်းဆုံး အိမ်တစ်လုံးကို မည်ကဲ့သို့ ပိုင်းခြားထားသည်ကို ပြသရန် နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အိမ်တစ်လုံးကို ပြုပြင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် ပြန်လည်အလှဆင်သည့်အခါ သို့မဟုတ် တစ်စုံတစ်ဦးကို ပြသရမည်ဆိုလျှင် ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကြံကောင်းတစ်ခုရှိသည်။
ယခုဖန်တီးထားသော လေယာဉ်သည် 2D လေယာဉ်ဖြစ်သည်။ Word သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ပိုမိုလက်တွေ့ကျသော ဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိရန် ဖြစ်နိုင်ချေကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့ဖန်တီးထားသော ဤလေယာဉ်တွင် ဓာတ်ပုံများကို ထည့်သွင်းပါက လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခု၏ ရှုထောင့်ကို သုံးဖက်မြင်ကို ဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည် များစွာသောကိစ္စများတွင် အာကာသကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာမြင်ယောင်နိုင်စေရန် သို့မဟုတ် ထိုနေရာ၌ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်စုံတစ်ရာပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရွေးချယ်မှုများကို မြင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤအရာကို ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နိုင်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ယခင်ပုံစံနှင့် ဆင်တူပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ယခင်က ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုခဲ့သည့် အလားတူကိန်းဂဏန်းအချို့ကို အသုံးပြုရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ရင်တောင်မှ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစစ်အမှန်ဓာတ်ပုံများထည့်ရန်လည်းလိုအပ်လိမ့်မည်။. ဤအရာသည် အချိန်တိုင်းတွင် ပိုမိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့် ပိုမိုလက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိရန်လည်း ကူညီပေးမည့်အရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အချို့သော သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းသည် လုပ်ရန် စိတ်ဝင်စားသည့် အရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အဆင့်များသည် ရှုပ်ထွေးလွန်းလှသည်။ ဤသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာဖြစ်သည်-
ထောင့်မှန်စတုဂံတစ်ခုဆွဲပြီး နက်မှောင်သောအရောင်ကို ရွေးပါ။
မြေပြင်နှင့်တူစေရန် ကုပ်ပိုးပုံသဏ္ဍာန်ကို ထည့်သွင်းပါ။
Insert option မှတဆင့် နောက်ပိုင်းတွင် အသုံးပြုမည့် ပုံတစ်ပုံကို အင်တာနက်မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး Online Images option ကို ရွေးပါ (၎င်းတို့သည် ဤကိစ္စတွင် သင်လိုချင်သော အခန်းမှ ဖြစ်နိုင်သည်)။
ဓာတ်ပုံများသည် PNG ဖော်မတ်ဖြင့် ဖြစ်ရမည်၊ ၎င်းသည် သင့်အား ပုံ၏နောက်ခံကို ဖျက်နိုင်ပြီး သင့်ဒီဇိုင်းတွင် သင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများကိုသာ ချန်ထားနိုင်သောကြောင့် ၎င်းသည် သင့်အား ခွင့်ပြုပေးမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံများ၏ နောက်ခံကို ဖျက်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည့် Online Image Editor ကဲ့သို့သော ဝဘ်ပေါ်ရှိ ကိရိယာများကို အသုံးပြု၍ နောက်ခံကို ဖျက်နိုင်ပါသည်။
Insert option ကိုနှိပ်ပြီး Images ကိုရွေးချယ်ပါ။
မြေပုံပေါ်ရှိ သင့်ဒီဇိုင်းတွင် ထည့်သွင်းလိုသော မေးခွန်းရှိ ဓာတ်ပုံကို ရွေးပါ။
အခြားဓာတ်ပုံများထည့်မည့် အိမ်ရှိ အခြားအခန်းများနှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြန်လုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်၊ စာရွက်စာတမ်းရှိ Lines လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြု၍ ကိန်းဂဏန်းများအားလုံးကို ချိတ်ဆက်ပါ။
ဒီဒီဇိုင်းက ပိုပြီး လက်တွေ့ကျတယ်၊ ရုပ်ပုံတွေနဲ့ 2D လေယာဉ်ကို ပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်၊ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရလဒ်ကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အိမ်ရှိအခန်းအားလုံးအတွက် ဓာတ်ပုံများကို ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအတွက် သင့်လျော်သည့်ဖော်မတ်ရှိကာ ၎င်းတို့၏နောက်ခံကို ဖျက်ရန် လိုအပ်သောကြောင့် ၎င်းမှာ အနည်းငယ်ရှည်ကြာသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည် Word ရှိ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင် အစီအစဉ်တစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် အချိန်ပိုယူရမည့်အရာဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများစွာအတွက် အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ အထူးသဖြင့် အစီအစဉ်သည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့က ၎င်းကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သို့မဟုတ် စီးပွားဖြစ်နည်းလမ်းဖြင့် ပြသလိုသောကြောင့်မဟုတ်ဘဲ၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤနည်းဖြင့် 2D နှင့် 3D အစီအစဥ်နှစ်ခုလုံးကို ဖန်တီးနိုင်သည့်နည်းလမ်းများကို သင်တွေ့မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » ရုံးအလိုအလျောက် » Word တွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ပြုလုပ်နည်း- အဆင့်ဆင့်